DJ SHADOW: INTABA IWILE EP UKUHLAZIYWA KWEALBHAMU - IINDABA
Intaba Iwile EP
Kwi-EP yokulandelela ukuya kunyaka ophelileyo Intaba iya kuwa , I-Shadow bucks okulindelweyo kwaye ifumana ukukhuthazwa ekusebenzisaneni okungenakulindeleka noNas noDanny Brown.
Kwasebutsheni bomsebenzi wakhe, emva xa wayesekholejini-kunomathotholo umqhubi kwiminyaka eliqela ukusuka ekukhuthazeni Umxube Ukutyala igama elithi-hop-hop, u-DJ Shadow wenza indlela yakhe yokwenza oko kudla ngokwenziwa ngabavelisi be-hip-hop: ukudala ii-beats zabarepha. Wakha i-CV ethembisayo, kwi-mixtape yakhe eyapapashwa ngo-1991 Ukwakhiwa kwakhona kweHip Hop kuMhlaba oPhezulu (Iqukethe iidrama-ze-apocalypse remix kaEric B. & Rakim 's Vumela iRhythm Hit' Em) kwixesha lakhe lokwenza I-G-funk-yokwakha kwakhona iiklasikhi Nge-neo-Panther kunye neBay Area MC eParis, ngo-1992, ukuya kugqatso lwakhe eSolesides, ukuqala ngo-1993, ukwenza iminqwazi yeBlackalicious kunye neLateef the Truth Somlomo. Kodwa kanye Iyazisa ..… yaqhuma ngo-1996, i-Shadow's aptitude of abstract instrumental beats yathatha indawo ephambili. Kwaye ngaphandle okunqabileyo- uKool G Rap kunye noMike D batshintshana ngokujongana neeDrum of Death kwiiUNKLE Ingqondo yamanga ; ujikelezo lwehypy on Umntu wangaphandle (leyo, yitsho into oyithandayo, usinike i Umkhondo omkhulu we-E-40 ); Ingqungquthela ye-Posdnuos / Kweli yokuhamba ngasemva Okuncinci Uyazi, ngcono Hlala kwiKhosi-umculo wakhe wawukhonkxiwe, uhlala ungenabulungisa, njengehip-hop yabantu abangayithandiyo i-rap.
Ukuba inyani yokuba i-Run the Jewels collab Akukho mntu uthethayo waba kude kwaye waba sesona sihlwele sikhulu-okonwabisayo kunyaka ophelileyo Intaba iya kuwa ayifaki i-Timbs kuloo ngcamango, i-twofer ehamba phambili kwi-EP yokulandelela Intaba Iwile mhlawumbi kufanelekile. Akukho rapper we-90s-vet rapper-rapper njengoNas, kwaye bambalwa ii-MCs kule minyaka ilishumi abaye bafikelela kwi-EDM kunye nabaphulaphuli be-indie ngokwabo ngokunyaniseka ngempumelelo njengoDanny Brown, ke ukubangenisa kwintsebenziswano kufundwa njengokuhamba kwe-canny kwi umphezulu. Kodwa imbali kaShadow ye-fuck-ucinga ukuba ucinga ntoni i-iconoclasm ibeka ezi zinto zibalulekileyo zokusebenzisana kumxholo womculo otyhala ii-optics ezidlulileyo.
Umzekelo: Yintoni oyilindeleyo kwaShadow evelisa i-Nas xa bobabini amagcisa beye basindwa ngumthwalo wokulindela ukubuyela kwiifom zabo zokuqala? U-Nas uye wahlala ethule ukususela ngo-2012, Ubomi bumnandi , gcina ii-singles ezimbalwa ezilahlekileyo ezigcina ikamva lakhe elijolise kubadala. Ke ukumva amped kunye nokuphefumlelwa kuhlala kwamkelekile, nokuba kungumxholo omncinci wokuchithachitha. Inkqubo ibonakala ngathi ikrazukile phakathi kwefuck-the-system ifuna ukuhlala kuzo zonke izitalato kunye neepod-mogul amaphupha eetekhnoloji-uxinzelelo olwanika indawo eyazisayo kwisandi seSilicon Valley ngelixa benqwala kutyalo-mali lukaNas nolwakhe AmaQabane eQueensBridge Venture . Ubuncinci unayo i-jittery, i-electro-G-funk ebethekileyo yokubetha ukuze ucamngce ngongxowankulu emva kwexesha ukuya; iphantse yafana nodolo ngqo kubanduleli bakaNas kwiQueens 'Juice Crew, ucinga ukuba ibetha kakhulu ukungcola, iziphelo ezikwinqanaba eliphantsi njengoMasta Ace Uzalelwe ukuQengqeleka .
Okwangoku, uDanny Brown ubeka eyakhe imbambano kwiHorror Show, edlala zombini ngokuchasene nohlobo aluchithe kakhulu Umboniso Woburhalarhume ujonge phantsi njengotshaba: i-manic maniac kwimisonto yeenkwenkwezi zerwala ezichitha ingqokelela yengxowa yeziyobisi ejongeka njengokuxubana kwendlela. Ivesi yokuqala ye-Porsche-flooring coke hubris idibanisa ukuya kwisandi sesibini sokuzicekisa ngokuzicekisa ngengoma yengoma eculekileyo kwindawo ethile phakathi kokuzihlazisa kunye nokusongela wonke umntu: Wamkelekile kumdlalo wam owoyikisayo / owoyikisayo, ndiza kwenza njani nonke . UDanny's kububanzi bakhe apha, kodwa xa ezona zandi zakhe zibanzi zifana ne-Weezy '07 -via-Alice Cooper '73 monster eyenza ii-albhamu zakhe zokugqibela ezintathu zokucofa umqala, konke okushiyekileyo kukukwenza intloko. Kwaye nokuba i-galoot edibeneyo yokubetha eyakhelwe ngu-Shadow iyothusa ngakumbi kwi Carnival emnyama ingqiqo, kunokuba Umsebenzi wewotshi , sisizathu esivakalayo sokuba anyathele kunye nezinye zeengqushu zokubetha-inkunzi yegusha kunye neebasslines awakhe wazenza.
Oko kwathiwa, akukho kuninzi kokungazinzi kokubethwa okubethelela ezona ndlela zakhe zibalaseleyo, nokuba kukuculwa kwe-rap okanye izixhobo ezibini ezijikeleza izinto. Iindaba ezimnandi sisiqwengana esincinci esinqabileyo se-70s-prog kick / snare / synth noodling ngokuvakalayo ngathi sisikrelemnqa kunye nomzamo wokunxila wokutyhala i-Moog engasebenzi kakuhle ukunyuka kwezinyuko zealuminium. (Phantse ulindele ukuba uHannibal Buress enze yenza ingoma yengxoxo yebhokisi engenangqondo Kukho okuthe kratya kokuvalwa kweePaseji, isixhobo esibonisa ulungelelwaniso lomtya ngumqambi ophumelele imbasa yeAkhademi uSteven Price; ubukhulu becala ihambelana nokuhamba-hamba kohambo lwe- Intaba iya kuwa kwaye athabathe ubunzima be-post-dubstep yesingqisho sokuba uMngcwabo ushiye umntu wakhe wokugqibela. Kodwa nje ukuba iiokhestra zomculo ziqale ukoyisa umculo we-bass-locomotion u-Shadow owakhelweyo, i-cinematic yayo iyahluma ijika ukubumba okunamandla kube ngamanqaku ekhangela indawo yokulwa enamandla amakhulu-enomtsalane, kodwa ukude ngokweemvakalelo. Iingoma ezintathu ezilungileyo kule EP zinokuhlengahlengiswa Intaba iya kuwa Ulwakhiwo ngokubanzi ngokwaneleyo, kodwa ii-rap zimbini zisebenzisana ngokucacileyo. Kulungile ukuva uShadow uyaqhubeka nokusebenza ngeendlela ezintsha, kodwa ngamanye amaxesha kungcono ukumva efumana ii-angles ezintsha ezinomdla kwezindala.
beck up ubusuku bonke ingoma
Intetho yesibongo, imvelaphi, ukuhambelana kwefayili Miguel
kunini kodak ejele
dr. inja shame, shame
u-eric kunye nentliziyo b